Dhangii - Rasaasaalee fi Taasiisaa Lakkoofsaafili. Cancala fuulaaIddoofili
Sadarkaa(lee) fooyyeessuu barbaadde fili.
Lakkoofsa kennuu ...n hordofame
Lakkoofsa kennuu hordofuuf dhaabaduu caancalaa yoo filate, akka qubannoo dhaabduu caancalaaatti gattii hi'eentaa hin taanee galchuu ni dandeessa.
Mallattoolee lakkaawwii hiriirfamaa qindeessi. Iddoo "irratti hiriirfame" irraatti kallattii jalqabaan lakkaawwii mallattoo hiriirsuuf "bitaa" fili. Iddoo "irratti hiriirfame" irratti kallattii duraan lakkaawwii mallattoo hiriirsuuf "mirga" fili. Mallattoo nannoo "irratti hiriirfame" irratti wiirtessuuf "Wiirta`e" fili.
Dirqalli hiriirfama Lakkoofsa hiriirfam keewwtaa hin qindeessu.
Bakka mallattoon lakkaawwii fuuli mudana bitaa irraa fagaatu hiriirsuu galchi.
Fageenya mudana fuula bitaa irraa gara sararoota hundaa keewwata lakkaa`amee keessaa kan sarara duraa waliin deemuu galchi.
Mudana fuula bitaa (ykn qarree bitaa wanta barruu)fi mallatoo lakkoofsa kennuu qarree bitaa dhiisuuf hanga iddoo galchi.
Sadarkaa ammee sadarrduraaniitiin walittii dhuufani sadarkaa tarree keessatti galcha.
Baliina lakkoofsa kennuu
Bitaaqaree mallaffoo lakkoofsa kennuufi bitaa qarree barruu gidduu dhiisuuf hangaiddoo galchi.
Mirga qarree mallattoo lakkoofsaafi bitaa qarree barruu gidduu dhiisuuf hanga iddoo xiqqaa galchi.
Gatiiwwan addaan fageenya figalumsa gara gatiiwwan durtii haaromsa.
Title is: Qubannoo